History & Culture Tantara Amerikana Latina
Cuba, Meksika ary Kolombi Topika ny lisitra
Na dia nahazo ny fahaleovan-tena avy any Espaina aza ny ankamaroan'ny Amerikana nandritra ny vanim-potoana tamin'ny taona 1810 hatramin'ny 1825, dia ny sehatr'ireo ady an-trano sy revolisiona marobe maro. Mifototra amin'ny fanafihana rehetra manoloana ny fahefan'ny Revolisiona Kiobana izy ireo amin'ny fanimbazimbana ny ady an'arivorivon'i Kolombia, saingy izy rehetra dia maneho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavan-tanindrazan'ny mponina any Amerika Latina.
Huascar sy Atahualpa: ady an-trano Inca
Atahualpa, mpanjaka farany an'ny Incas. Sary an'ny daholobe
Ny ady an-trano sy ny revolisiona ao Amerika Latina dia tsy nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena avy any Espaina na noho ny fandresena Espaniola. Ny Amerikanina Indianina izay niaina tany amin'ny Tontolo Vaovao dia matetika nanana ady an-trano sasantsasany talohan'ny nahatongavan'ny Espaniola sy ny Portiogey. Ny Fanjakana Inca mahery dia niady tamin'ny ady an-trano nahatsiravina nanomboka tamin'ny 1527 ka hatramin'ny 1532, satria ireo rahalahy Huascar sy Atahualpa dia niady ho amin'ny seza nialan'ny fahafatesan'ny rainy. Tsy an'arivony an'arivony monja no maty tamin'ny ady sy ny ady an-trano, fa ny empira nahavariana ihany koa dia tsy afaka niaro tena rehefa tonga tany Francisco Pizarro tamin'ny 1532 ny mpitaky teny Espaniola.
Ny Ady Meksikana-Amerikana
Ny ady tao Churubusco. James Walker, 1848
Teo anelanelan'ny 1846 sy 1848 dia niady i Mexico sy Etazonia . Tsy voatery ho toy ny ady an-trano na ny revolisiona izany, kanefa dia zava-nitranga manan-danja iray izay nanova ny sisin-tany. Na dia tsy tanteraka tanteraka aza ny Meksikana, ny ady dia mikasika ny faniriana ny fanesorana an'i Etazonia amin'ny faritra andrefan'i Meksika - izay efa ho an'i Kalifornia, Utah, Nevada, Arizona ary New Mexico ankehitriny. Taorian'ny fahaverezan'ny fanelingelenana izay nahita ny fandresen'i Etazonia an'i Etazonia , dia voatery nanaiky ny fepetra voalazan'ny Fifanarahana an'i Guadalupe Hidalgo i Meksika . Miala amin'ny ampaha-telon'ny faritaniny tamin'io ady io i Meksika. Bebe kokoa "
Kolombia: Ady An'arivony
Rafael Uribe. Sary an'ny daholobe
Avy amin'ireo Repoblika Atsimo Amerikana rehetra izay niaina taorian'ny nianjeran'ny Antenimiera Espaniola, angamba i Kolombia izay nijaly tamin'ny ady an-trano. Ireo mpandala ny nentim-paharazana, izay nankasitraka ny governemanta foibe, ny zon'ny mpifidy voafetra ary ny anjara asa manan-danja ho an'ny fiangonana ao amin'ny governemanta), ary ny Liberaly, izay nandrisika ny fisarahana ny fiangonana sy ny fanjakana, ny governemanta isam-paritra sy ny lalàm-pifidianana malalaka, dia niady izany ary nandritra ny 100 taona mahery. Ny Ady An-tapitrisany dia maneho ny iray amin'ireo vanim-potoana be famonoana ity fifandonana ity; Izany dia naharitra tamin'ny taona 1899 ka hatramin'ny 1902 ary nandany fiainana Kolombiana maherin'ny 100.000. Bebe kokoa "
Ny Revolisiona Meksikana
Taorian'ny am-polontaona nandritra ny am-polon-taonan'ny governemanta Porfirio Diaz, nandritra ny fandrosoana an'i Meksika saingy ny harena ihany no nahatsapa ny tombony ho an'ny mpanankarena, dia nandray fiadiana ireo vahoaka ary niady ho amin'ny fiainana tsara kokoa. Notarihan'ny mpilalao fanta-daza toa an'i Emiliano Zapata sy Pancho Villa , dia nanjary tafika goavana ireo vahoaka masiaka ireo izay niampita ny afovoany sy avaratr'i Meksika, niady tamin'ny hery federaly ary nifamotoana. Ny revolisiona dia naharitra tamin'ny 1910 ka hatramin'ny 1920 ary rehefa niorina ny vovoka dia an-tapitrisa no maty na nafindra toerana. Bebe kokoa "
Ny revolisionan'ny Kiobana
Fidel Castro tamin'ny taona 1959. Sary an'ny daholobe
Tamin'ny taona 1950, i Kiobà dia nifanaraka tamin'ny Meksikana nandritra ny fitondran'i Porfirio Diaz . Niroborobo ny toekarena, saingy vitsy ihany no nahatsapa ny tombony. Mpanao didy jadona Fulgencio Batista sy ny taranany dia nitondra ny nosy ho toy ny fanjakany manokana, manaiky ny fandoavam-bola avy amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy casinos izay nanosika ireo Amerikana mpanankarena sy olo-malaza. Nanapa-kevitra ny hanao fiovana sasantsasany ny mpisolovava tanora, Fidel Castro. Miaraka amin'ny Rahalahy Raul sy ireo mpiara-dia aminy Che Guevara sy Camilo Cienfuegos , niady ady anaty akata tamin'ny Batista izy tamin'ny taona 1956 hatramin'ny 1959. Niova ny fandresen'ny fahefana manerana izao tontolo izao ny fandreseny. Bebe kokoa "
Ny biography of Juan Peron
Ante Pavelic, Krizin'ny Ady Heloka Bevava
Ireo Liberaly Lehibe Indrindra any Amerika Atsimo
Ny ady tao Boyaca
Diego Rivera: Ilay mpihira fanta-daza izay niatrika fifandirana
Explorer Panfilo de Narvaez no tratry ny loza tany Florida
Ny biography of Father Miguel Hidalgo y Costilla
Nanampy an'i Hercules ny The God Athena Athena
Ireo fotodrafitr'aretina telo momba ny kapitalisma sy ny fahasamihafany
Ny Sinoa Sinoa amin'ny teny mandarinina
Mantel sy Mantle
Rehefa lasa tenimiafina ny teny Espaniôla
Handefa ireo hira alemà avy amin'ny iTunes
Sarin'i Karl Benz
Tetikady 10 ho fanohanana ny mpianatra voakasik'izany fihenana amin'ny kilasy fianarana
7 Fanomezana an-tsitrapo ho an'ny andron'ny mpifankatia
Cómo llenar el DS-260 para visa de intermigrantes antes de la entrevista
Rajasaurus, ilay Dinôzôra maty mahafaty
Ny fomba nanamboarana andian-tsambo 4 be dia be ny anarany
Fandraisana an-tsoratry ny Southern Southern University
Ny fomba niaretan'ny tantely dia tamin'ny ririnina
Meditation sy Batemy
Torohevitra momba ny mpitsikilo momba ny fiteninao manokana
Yin-Yang: Ianao ve i Yin na Yang?
Saint Elizabeth Ann Seton, tompon'andraikitra amin'ny alahelo
Ady Lehibe I / II: USS New York (BB-34)
Mamaritra ireo lohahevitra amin'ny Microsoft Access 2013
Lisitry ny sekolim-panjakana antserasera malalaka ho an'ireo mpianatra ao Alabama, K-12